Bulie mmanya maka Peeji nke nwere nchịkọta ndebiri ndị a ugbu a | Esi m mac
Bulie mmanya maka Peeji na nchịkọta ndebiri ndị a ugbu a
Echere m na anyị niile ga-ekweta na-ekwu na ọdịnaya bụ ihe dị mkpa n'ezie, obu kwa eziokwu na imewe, mbido ya, ihe okike ya, nas ihe na-adọta anya gị na nke mbụ. Ọ bụ ya mere akwụkwọ ji nwee mkpuchi dị mma, magazin gụnyere foto na ihe osise, ma ọ bụ Macs anyị na-elekọta ọbụna obere nkọwa, ọbụlagodi igbe nwere ha. Otu ihe ahụ na-eme na akwụkwọ anyị.
Mgbe anyị na-akwadebe akụkọ, nyocha akwụkwọ, ọrụ klaasị, wdg, anyị nwere ike ịbelata onwe anyị ide ederede ọdịnaya ya mgbe ọ bụla, na-enweghị ị payinga ntị na mpempe akwụkwọ, mpempe akwụkwọ, ntinye nke onyogho na-akọwa ma ọ bụ na-emeju ọdịnaya ahụ content Ma obu anyi nwere ike ichoputa ihe puru iche, nke mmadu, nke mara mma, nke ohuru, nke izizi nke na-akpali mmasi nke ndi na eme ya. Nke a bụ kpọmkwem ihe ị ga - eji nweta ya Ndebiri maka Peeji, otu nchịkọta ndebiri maka dọkụmentị gị na ugbu a ị nwere ike ịnwe ihe karịrị otu euro.
Ndebiri maka Peeji
Ọ bụghị oge mbụ anyị na-ewetara gị ụdịrị onyinye a Esi m mac ya mere, ọ bụrụ na ị bịaghị n'oge n'oge ndị ọzọ, nke a bụ ohere ọhụụ mepụta akwụkwọ nke izizi na nke dị egwu.
«Ndebiri maka ibe» bụ nchịkọta zuru ezu na gụnyere ihe karịrị ndebiri nde abụọ na narị asatọ yabụ ị nwere ike ịmepụta mkpuchi, broshuọ, ọkọlọtọ, akwụkwọ mmado na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ọtụtụ atụmatụ na ụdị dị iche iche, site na ịdị mma na nke pere mpe na-elekwasị anya na-acha na azụmahịa.
A na-enye ndebiri niile na ụdị A4 (210 x 297 mm) ndị a ma ama na US Letter (8½ x 11 sentimita asatọ), ewezuga ụdị akwụkwọ ụfọdụ, dị ka broshuọ. Ọzọkwa, ha bụ dị mfe iji inwe ike idowe, megharia ma ọ bụ hichapụ ihe niile ejiri etinye na ndebiri ọ bụla, pịa / dee ederede nke gị, dochie onyonyo nke ejiri nke gị ma ọ bụ tinye ndị ọhụrụ, gbanwee ederede ederede na ọtụtụ ndị ọzọ.
"Ndebiri maka ibe" nwere ọnụahịa oge niile nke euro 24,99, agbanyeghị ugbu a ị nwere ike nweta ya na mbelata 96% maka naanị € 1,09. Nkwalite a bụ onyinye nke izu abụọ nke "Mac App Store Sales" ka ọ ga - abụ malite na echi, Fraịdee, Septemba 22 n’etiti abalị. Ekwela ka ọ gbapụ! Ma ọ bụrụ na i mechaghị kwenye, cheta na ị nwere ike ịrịọ nkwụghachi site na iTunes wee nweta ego gị.
Cheta na iji «ndebiri maka ibe» ị ga-enwerịrị ụdị kachasị ọhụrụ nke peeji ndị arụnyere na Mac gị
Ndebiri maka ibe - DesiGNfree
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Bulie mmanya maka Peeji na nchịkọta ndebiri ndị a ugbu a
Apple na-ebupụta ngalaba ọhụrụ na iTunes akpọ 4k HDR
Ndị a bụ echiche mbụ nke Apple Watch Series 3